Geography KwiJografi yeDolophu
Isihloko esivumelanayo sokuGentrification kunye nempembelelo yayo kwiCore City
I-Gentrification ichazwa njengenkqubo eyenziwa ngabantu abacebileyo (abantu abangenayo imali engenayo phakathi), bavuselele, babuyisele indlu kwaye ngamanye amaxesha amashishini angaphakathi kwimizi okanye ezinye iindawo eziye zahlaselwa ngabantu abahluphekayo.
Ngaloo ndlela, i-gentrification ichaphazela imimandla yabantu ngenxa yokuba ukwanda kwenzalo ephakathi kunye neentsapho zihlala ziphumela ekunciphiseni ngokubanzi kwiintlanga ezincinci.
Ukongezelela, ubukhulu bendlu buyancipha ngenxa yokuba iintsapho ezincinci zengeniso zithatyathwa ngabantu abatsha abangatshatanga kunye nezibini ezinqwenela ukuba zisondele kwimisebenzi kunye nemisebenzi kwinqanaba lasezidolophini .
Iimakethe zengingqi zitshintsha kwakhona xa ukuguqulwa komzimba kwenzeka ngenxa yokuba ukwanda kwamaxabiso kunye neendleko zekhaya kukunyusa ukukhutshwa. Xa oku kwenzeka ukuba iiyunithi zokuqashisa zivame ukutshintshelwe kwiikhondomu okanye izindlu zokunethezeka ezikhoyo ukuthenga. Njengenguqu yendawo yokuhlala, ukusetyenziswa komhlaba kusetyenziswe kwakhona. Ngaphambi kokuba kuthotywe ezi ndawo zihlala ziquka izindlu eziphantsi kwezindlu kunye kunye namaxesha amancinci. Emva koko, kusekho izindlu kodwa ngokuqhelekileyo kuphelile ukuphela, kunye neofisi, ukuthengisa, iivenkile kunye nezinye iindlela zokuzonwabisa.
Ekugqibeleni, ngenxa yolu tshintsho, i-gentrification ichaphazela kakhulu inkcubeko kunye nomlingiswa wendawo, okwenza i-gentrification inkqubo enokuphikisana.
Imbali kunye neZibangela zeGentrification
Nangona i-gentrification ifumene unomxholo osanda kutshanje, eli gama lenzelwe ngo-1964 nguRuth Glass. Wenyuka kunye nawo ukuchazela ukutshintshwa kwabasebenzi okanye abaphantsi beklasi ngabantu abaphakathi kwinqanaba laseLondon.
Ekubeni i-Glass ikhulile ngeli xesha, kukho iinzame ezininzi zokucacisa ukuba kutheni ukuqhutyelwa kwe-gentrification. Eminye yemizamo yokuqala ukuyichaza iyinkcazo yendlela yokuvelisa kunye nokusetyenziswa.
I-theory-sideory theory idibene ne-geographer, u-Neil Smith, ochaza i-gentrification esekelwe kulwalamano phakathi kwemveliso kunye nemveliso. USmith uthi iindleko eziphantsi kwiindawo ezisemaphandleni emva kweMfazwe Yehlabathi II zikhokelela ekuqhubekeni kwenkunzi kwiindawo ezichasene nezixeko ezingaphakathi. Ngenxa yoko, iindawo zedolophini zaye zashiywa kwaye ixabiso lomhlaba liye lahla xa ixabiso lomhlaba kwizithili zanda. USmith wenyuka kunye nenkokhelo yakhe yendawo yokuqashisa kwaye wayisebenzisa ukuze achaze inkqubo yokwenza i-gentrification.
I-theory-gap theory ngokwayo ichaza ukungalingani phakathi kwexabiso lomhlaba ekusebenziseni kwalo kunye nexabiso elinokuthi umhlaba ungaluthola ngaphantsi "kokusetyenziswa okuphezulu nangcono." Usebenzisa imbono yakhe, uSmith wathi enkulu ngokwaneleyo, abaphuhlisi beza kubona inzuzo enokuphuhliswa kwimihlaba yangaphakathi. Ingeniso efunyenwe ngokuphuhliswa kwezi ndawo ivala i-rent-gap, ekhokelela kwiirhafu eziphezulu, ukuqeshiswa, kunye nemali-mboleko. Ngaloo ndlela, ukwanda kwenzuzo ehambelana nenkolelo kaSmith kubangela ukunyusa.
I-theory-side -ory theory, eyaziwa ngokuba ngu-geographer uDavid Ley, ubhekisela kwiimpawu zabantu abenza i-gentrification kunye nento abayidlayo ngokuchasene nemarike ukuchaza ukunyusa.
Kuthiwa ukuba aba bantu benza iinkonzo eziphambili (umzekelo, oogqirha kunye / okanye abagwebi), banandipha ubugcisa kunye nokuzilibazisa, kunye nokufunwa kwempahla kwaye banenkxalabo ye-aesthetics kwizixeko zabo. I-Gentrification ivumela ukuba utshintsho olunjalo lwenzeke kwaye lubaleka kulo manani.
Nangona kuzwakale kulula, ukuguqulwa kwenzeka kwenzeka njengenkqubo eqokelela umxhesho omkhulu ngexesha. Isinyathelo sokuqala kwinkqubo kubandakanya oovulindlela basezidolophini. Laba ngabantu abafudukela kwiindawo ezihlawulekayo abanakho ukuphuhliswa. Oovulindlela basezidolophini ngokuqhelekileyo badla ama-artists kunye namanye amaqela anesineengxaki ezinxulumene nomzi wangaphakathi.
Ekuhambeni kwexesha, oovulindlela basezidolophini banceda ukuhlaziya kunye nokulungisa "indawo". Emva kokwenza njalo, amaxabiso aya kunyuka kwaye abantu abangenayo imali engaphantsi apho bahlaziywa kwaye bathatyathwa ngabantu abaphakathi nabangeniso.
Aba bantu bafuna iimfuno ezinkulu kunye ne-stock yokuhlala kunye namashishini atshintshe ukubanceda, ukuphakamisa amaxabiso.
Ezi zinyuka zithengi ke zinyusa abantu abasele bafumana imali engenayo kwaye abantu abangaphezulu kunye nabangenayo abaphambili banomtsalane, baqhubela phambili umjikelezo we-gentrification.
Iindleko kunye neNzuzo yeGentrification
Ngenxa yolu tshintsho olunzulu kummandla, kukho zombini izinto ezintle kunye nezimbi ukuya ku-gentrification. Abagxeki be-gentrification badla ngokubakho ukuba uphuhliso lwezorhwebo nokuhlala kwindawo enkulu kakhulu emva kokuphuhliswa. Njengomphumo walezi zihlandlo ezinkulu zokwakha, kukho ukulahleka kweendawo ezisemadolobheni kwaye iindawo ezinobuncwane ziba yindawo enobungqingili kunye nezokwakha izakhiwo ezizinzileyo. Kwakhona kukho inkxalabo yokuba uphuhliso olukhulu lukhulu naziphi na izakhiwo zembali ezishiye kwiindawo.
Ukugxeka okukhulu kunona ukunyuka kwamanzi kunye nokufuduka kwayo kwendawo yokuhlala yasekuhlaleni. Ekubeni iindawo ezinamafutha zihlala zihlala kwindawo ephantsi kweedolophu, abahlali abangaphantsi kwexabiso abagqityiweyo kwaye ngamanye amaxesha bayashiywa kungekho ndawo yokuya kuyo. Ukongeza, iintambo zokuthengisa, iinkonzo, kunye nezonxibelelwano zentlalo nazo zithengiswa kwaye zithathelwa indawo yokuthengisa ephezulu kunye neenkonzo. Yiyo le mpawu ye-gentrification ebangela ukuba kubekho uxinzelelo phakathi kwabahlali kunye nabaphuhlisi.
Nangona kukho ukugxekwa nangona kunjalo, kukho iinzuzo ezininzi zokungena. Ngenxa yokuba ihlala ikhokelela kubantu abahlala emakhaya abo kunokuba baqeshwe, ngamanye amaxesha kunokukhokelela ekuzinzileyo kwendawo.
Kwakhona kwakha isidingo sokwanda kwezindlu ukwenzela ukuba kukho indawo engaphantsi kwepropati. Ekugqibeleni, abaxhasayo be-gentrification bathi ngenxa yokunyuka kwendawo yabemi basekuhlaleni, amashishini anenzuzo kuba kukho abantu abaninzi abachitha kuloo ndawo.
Nangona kuthathwa njengento efanelekileyo okanye engalunganga kunjalo, akukho nto iyakwazi ukuba iindawo ezinobungakanani ziba yiindawo ezibalulekileyo zezona zixeko kwihlabathi jikelele.
"Ngaba Akukho Mnye Oya kundingcolisa Lo Mbingeleli oMdaka?"
I-5 yama-Muslim Daily Times kunye Nezo Zithethayo